The Best Electric Skateboard Backpacks For Board Your - Jomo Technology Co., Ltd
The Best Electric Skateboard Backpacks For Board Your
Kazhinji haudi kutakura yenyu yemagetsi skateboard refu noruoko, uye dare mukwende anogona kuita nyore zvikuru kuita kudaro. Aine pabhodhi mukwende, unogona kunzwa wakasununguka kutakura bhodhi rako kushanda munguva kuchinaya mangwanani uye zvichiri atasve nayo kumba kana zviri sunnier manheru. Pane nzira dzakawanda kwazvo yemagetsi skateboard Backpacks kuti anogona kutakura 15 LB + longboard:
Burton Day muchakairi Pro 28L
Imwe muchivande kuyeuka paunenge kutsvaka puranga mukwende ndechokuti snowboard Backpacks kazhinji kushanda zvakanaka zvakanaka. Burton, inozivikanwa snowboard midziyo muchiso, ane zvakawanda snowboard Backpacks zvinoshanda zvakanaka. The Day muchakairi Pro 28L ndiwo muenzaniso wakadai, ane zvakasiyana-siyana mavara, zvakawanda nzvimbo mamwe giya akafanana chiningoningo varindi uye ibvi Mapedhi, uye wehunyambiri purangazve Itai hurongwa.
Koowheel Electric Longboard Bag munhu zvakarurama vakasiyana uye nevakawanda nezvechisarudzo kutakura zvose nguva dzose uye dzemagetsi longboards . Ini pachangu zvikuru akakurudzira iyeyuwo sokunyorwa chaizvo kufarira vatengi vakawanda. Kunze, nokuda Christmas achiuya, Koowheel Christmas 8600mAh (Double simba) Replaceable Battery Limited Edition E-bhodhi iri kutengeswa. Just mazuva 20 chete. Hatigoni kutaura chinhu chinokosha chipo kuti vatengi zvitsva nezvitsaru.
Unogona kutenga Koowheel Longboard uye bhegi kutungamirira kubva pamutemo Website.
The Kubatana Skateboard mukwende iri nzira zvishoma muduku kuna makuru Burton uye Dakine muhomwe. It inotsigira Skateboards kusvika 15 LBS, saka haizi akagadzirirwa kuti zvairema mapuranga akafanana ichishanduka Bamboo GT. Zvisinei, namapuranga kufanana huvandudzike Board Dual + (2nd Gen ) kuti vauye chete pasi 15 LB muganhu, kuti Kubatana Skateboard Backpack achashanda chete akanaka.
For Bamboo GT kana Carbon GT varidzi (kana, vanozvikudza Bamboo GTX mangwanani adopters), ichishanduka anopa vakapiswa skateboard mukwende yakagadzirwa kuti ikwane mapuranga dzavo. It ane mwero zviri rakaita homwe water bottle (Zvisinei, ndohwavo insulated), uye tichifungisisa Logos saka motokari kuona iwe usiku.
Unogona kurayira kuti ichishanduka Backpack zvakananga kubva padandemutande ravo chitoro.
Post nguva: Dec-06-2017